Qaar kamid ah soomaalida Mareykanka oo codsanayo in loo cusbooneysiiyo sharci muhiim ah |
Qaar kamid ah soomaalida Mareykanka oo codsanayo in loo cusbooneysiiyo sharci muhiim ah
Xildhibaanada kala ah IlhanCumar, Pramila Jayapal, Yvette D. Clarke, iyo Adam Smith ayaa warqad u direen xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka Mike Pompeo iyo Xoghayaha waaxda amniga gudaha Chad Wolf, kaas oo ay ku codsanayaan in Maamulka Trump uu u ogolaado in waqti lagu daro sharciga TPS, oo ah sharci ku meel gaar ah oo la siiyo Soomalida qaxootinimo ku jooga Wadanka Mareykanka.
17-da bisha Maarso ee sanadkan, Soomali badan ayuu ka dhacayaa sharcigan, taas oo saameyn ku yeelaneysa dadka Soomalida ah ee aan haysan sharcigan, sidaa darteedana dib loogu celinayo dalka Soomaliya.
Xalimo Xassan Cabdi oo ku nool gobolka Tennessee oo ku yaala Koonfurta Mareykanka ayaa BBC u sheegtay in warqadda TPS ay ka caawiso inay ku joogaan dalkaas isla markaasna ay codsanayaan in warqaddaas loo cusbooneysiiyo.
Xaliima waxay sidoo kale sheegtay in codsi ay u gudbiyeen xildhibaanada qaar si waqti loogu daro xilliga uu dhacayo sharciga kumeel gaarka ah.
“Sharciga TPS waa waxa dhan aan waddanka ku joogno, waan ku shaqeysannaa….waxaana rajeyneynaa inay inoo ogolaadaan oo ay codkayagii aan dhiibannay wax inoogu qabtaan” ayay tiri Xaliima.